Ọzụzụ Sterilization Nri Ahụ
1. Ọzụzụ ebumnuche Site ọzụzụ, melite nwoke ịga ụlọ ọgwụ ozizi na ndị bara uru ọrụ larịị nke trainees, dozie nsogbu siri ike okosobode na usoro nke akụrụngwa ojiji na akụrụngwa mmezi, na-akwalite tozuru etozu arụmọrụ, ma melite na nkà mmụta sayensị na nchekwa nke nri t ...GỤKWUO »
Ọhụrụ, Nutrition, Safty, ụdị nri mkpọ a ga-abụrịrị ihe ịchọrọ!
Nri mkpọ bụ ihe ọhụụ nke kachasị ihe mere ọtụtụ mmadụ ji ahapụ nri mkpọ bụ maka na ha chere na nri mkpọ anaghị adị ọhụrụ. Akpọasị a sitere n'echiche ndị na-eri nri banyere nri mkpọ, nke na-eme ka ha were ndụ dị ogologo na staleness. Otú ọ dị, nri mkpọ bụ nke na-adịte aka ...GỤKWUO »
N’echiche gị, enwere ngwugwu mkpọ ọhụụ “juru gị anya”?
Post oge: Ọgọstụ-06-2020
Ka oge na-aga, ndị mmadụ ejirila nke nta nke nta ghọta ụdị nri mkpọ, na mmụba maka oriri na nkwalite na ọgbọ ndị na-eto eto na-eso otu. Were anụ nri ehihie mkpọ dị ka ihe atụ, ndị ahịa chọrọ ọ bụghị naanị ezigbo uto kamakwa ọ na-adọrọ mmasị na ngwugwu mara mma. Thi ...GỤKWUO »